ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာမြင့်မားတဲ့အပူချိန်မြေမှုန့်စုဆောင်း China Manufacturer
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: ဘွိုင်လာဖုန်ကောက်ခံရေး,ဘွိုင်လာအမြင့်အပူချိန် Deduster,ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာဖုန်ကောက်ခံရေး
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဘွိုင်လာဖုန်ကောက်ခံရေး > ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာမြင့်မားတဲ့အပူချိန်မြေမှုန့်စုဆောင်း
ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာဆန်ခါ reciprocating ဇီဝလောင်စာလောင်စာလောင်ကျွမ်းများအတွက်အသင့်တော်ဆုံးလောင်ကျွမ်းခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများချမှတ်။ အဆိုပါဘွိုင်လာ၏ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းမှာရိုးရာဘွိုင်လာမီးဖို၏အာကာသရိုးရာဘွိုင်လာမီးဖိုထက်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တစ်ဦးအလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်နှစ်ခုလေတိုက်ဇီဝလောင်စာလောင်စာများ၏မီးလောင်ရာအတွက် precipitated မတည်ငြိမ်သောကိစ္စ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုအပြည့်အဝလောင်ကျွမ်းခြင်းမှအကျိုးရှိသောတည်းဟူသောစီစဉ်ပေးထားပါသည်။ အဆိုပါဘွိုင်လာစက်နှိုးအလိုအလျောက်နားလည်သဘောပေါက်ရန်လောင်စာဆီ (ဓာတ်ငွေ့) စက်နှိုး burner တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဘွိုင်လာနို့တိုက်ကျွေးရေး, လောင်ကျွမ်းခြင်း, slag ဖယ်ရှားရေး, ရေပေးဝေရေးနှင့်စက်နှိုးသည်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်နှင့်စစ်ဆင်ရေးအလွန်အဆင်ပြေသည်။ အဆိုပါဘွိုင်လာခြိနျတှငျအပူမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပြာသိုက်ကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ဘွိုင်လာ၏ထိရောက်သောနှင့်တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေးသေချာနိုင်သည့်အလိုအလျောက် dedusting ကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။
အဆိုပါဘွိုင်လာအမြီးစီးပွားရေးနှင့်လေကြောင်း preheater တပ်ဆင်ထားသည်လည်းအသုံးပြုသူများကို '' လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အစဉ်အလာဘွိုင်လာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်း, ဘွိုင်လာမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အနိမ့်အိပ်ဇောဓာတ်ငွေ့အပူချိန်ရှိပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည် insulator တွင်လည်းပစ္စည်းနှင့်တကွ, ဘွိုင်လာမျက်နှာပြင်အပူချိန်အနိမ့်သည် ဖြစ်. , အပူဆုံးရှုံးမှုမှုမရှိခြင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်အမျိုးသားရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူတင်းကျပ်သောအညီ, ရှိသမျှဖိအားအစိတ်အပိုင်းများကိုအရည်အသွေးမြင့်မားဘွိုင်လာသံမဏိလုပ်နေကြသည်။ တိုင်းဘွိုင်လာရေဖိအားစမ်းသပ်မှုနှင့် X ကိုရောင်ခြည်စစ်ဆေးခြင်းအပါအဝင်စက်ရုံမထွက်ခွာမီတင်းကျပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အပေါ် manholes, စစ်ဆေးမှုများတံခါးများ, မီးတွင်းနှင့်ရှိပါသည်။ အဆိုပါပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလွန်အဆင်ပြေသည်။ ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာ၏အကြီးမားဆုံးဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်: စွမ်းအင်ချွေတာရေး, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အဆင်ပြေ installation နဲ့စစ်ဆင်ရေး။
ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာဘွိုင်လာ၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာဇီဝလောင်စာရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာ, ဇီဝလောင်စာရေပူဘွိုင်လာ, ဇီဝလောင်စာပူမီးဖို, ဒါပေါ်မှာဇီဝလောင်စာအပူ conduction ရေနံမီးဖို, ဒေါင်လိုက်ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာ, အလျားလိုက်ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာနဲ့ခွဲခြားသောဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာ၏ထိရောက်မှု 80% ကျော်ကယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ဘွိုင်လာ type ကိုပိုကြီးဖြစ်ပါသည်, လောင်ကျွမ်းခြင်းပိုပြီးလုံလောက်သောဖြစ်ပြီး, ဘွိုင်လာ၏ထိရောက်မှုမြင့်မားတဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အမြင့်ဆုံးကျောက်မီးသွေးပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ဘွိုင်လာ၏ပျမ်းမျှထိရောက်မှုအဆင့်ထက် 15% ပိုမိုမြင့်မားသောအရာ 88,3% အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာ၏ထိရောက်မှုအလွန်မြင့်မားသည်သော်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းစေသည်ဟုဖုန်မှုန့်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ဒါကြောင့်အဲဒါကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဖုန်မှုန့်စုဆောင်းရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာ၏ဖုန်မှုန့် remover သမိုင်းဝင်အခိုက်မှာပေါ်ထွန်း။
ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏ကုသမှုနည်းပညာသီးခြားစီတစ်ခုချင်းစီကိုဘွိုင်လာ၏ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ flue ဓာတ်ငွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘွိုင်လာအားဖြင့်ထုတ်လုပ်အဆိုပါ flue ဓါတ်ငွေ့။ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသို့မြေမှုန့်ပိုက်ထဲကနေဖုန်မှုန့်, ဒီအခြိနျမှာမွမှေုနျ့၌ကြီးမားသောအမှုန်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၏ centrifugal အင်အားသုံးခြင်းဖြင့်ကွဲကွာကြသည်, ထိုကြီးမားသောအမှုန်ဖုန်မှုန့်မုန်တိုင်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်းဖြင့်ဆေးရုံကဆင်းသည်နှင့်ဒဏ်ငွေမှုန်မြေမှုန့်ဝင် အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း။ filter ကိုအိတ် filtering ကိုတော်အားဖြင့်, အထည်အိတ်၏မျက်နှာပြင်မှပူးတွဲမြေမှုန့်ပထမဦးဆုံးသွေးခုန်နှုန်းထိုးနှက်မှတဆင့်မြေမှုန့်စုဆောင်း၏ဖုန်မှုန့်ပုံးတစ်ပုံးထဲမှာအာရုံစိုက်သည်, ပစ္စည်းများ၏ထိန်းချုပ်မှုပြန်လည်အသုံးပြုသို့မဟုတ်အသုံးပြုသည်။ အိတ် filter ကိုအပြီးပိုက်ကွန်ဓာတ်ငွေ့ပန်ကာကနေတဆင့်ခေါင်းတိုင်ကနေတဆင့်လေထုထဲသို့ဆင်းသည်။ အိတ် filter ကိုအားဖြင့်ဘွိုင်လာကနေ flue ဓာတ်ငွေ့များဖုန်မှုန့်များ၏ကုသမှုပတျဝနျးကငျြပတ်ဝန်းကျင်ကိုမီးခိုးနှင့်ဖုန်မှုန့်များ၏လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချနှင့်သန့်ရှင်းသောထုတ်လုပ်မှုရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
1 ကုသမှုလေကြောင်းအသံအတိုးအကျယ် (m3 / ဇ) 20000
2 စုစုပေါင်း filter ကိုဧရိယာ (M2) 461
3 filter ကိုလေတိုက်နှုန်း (ဍ / မိနစ်) 0.73
4 deduster ခုခံ (Pa) 1500
5 filter ကိုအိတ်ပစ္စည်း PPS
120 x 6000 ၏6filter ကိုအိတ်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် (မီလီမီတာ)
7 filter ကိုအိတ်အရေအတွက်သည် (ဘား) 204
8 သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် () 12
9 သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် (လက်မ) 3
10 compressed လေထုဖိအား Pa 0.2-0.3MPa
ဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲမှု 1.79 / T က
11 ထုတ်လွှတ်စံ <30mg / m3
ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာဘို့ဖုန်မှုန့် remover ၏ဒီဇိုင်းနိယာမ
1, ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာတန်ဆာပလာများ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ရွေးချယ်ရေး "အဆင့်မြင့်နည်းပညာ, စီးပွားရေးနှင့်လက်တွေ့" ၏နိယာမလိုက်နာပါ။
2. အဆိုပါရွေးချယ်ထားသည့်ဖုန်မှုန့် remover, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လက်တွေ့ကျတဲ့, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဆင့်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာချောမွေ့ပြေး, အနိမ့်ခုခံရေးနိမ့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု, ကောင်းမွန်သောသန့်ရှင်းရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အသေးစားဧရိယာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။
3, ဒီဇိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြည်နယ်ဖြစ်သင့်ကြောင်း, စစ်ဆင်ရေးကုန်ကျစရိတ်အနိမ့်သည်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ဘွိုင်လာဖုန်ကောက်ခံရေး , ဘွိုင်လာအမြင့်အပူချိန် Deduster , ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာဖုန်ကောက်ခံရေး , 20T ဘွိုင်လာဖုန်ကောက်ခံရေး , ဘွိုင်လာအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး , ဘိလပ်မြေဖုန်ကောက်ခံရေး , မိုင်း Bag ဖုန်ကောက်ခံရေး , မိုဘိုင်းဖုန်ကောက်ခံရေး